Haddii naafada ah loogu tala galay ay qubaan, ama bedelkiisa wax, ka dibna in aan doonaynin in la loo yaqaan xal ku habboon. iPhone la iman ay xeer gooni ah dhibaatooyinka inta badan Eebay iyaga naafada ah. Users Dad badan ayaa ka cawday bar cas oo soo bandhigeen shaashadda guriga ama taleefanka si buuxda baraf ilaa ay damiso. Waxaasoo dhami waxay tilmaan ka mid ah naafada iPhone uga tarto waaweyn. Dhab ahaantii, in aanay ahayn oo dhan. Sirta ah si qalad ah ama caddaymaha camera qaldamay sidoo kale hoos category ee mobiilka iPhone ama naafada ah.
Gudub dhibaato galo code
Sixidda iPhone in uu yahay naafo ah ay tahay mid fudud. Waxaa muhiim ah in la ogaado in xeerka pass yahay ammaanka qiyaas si aad u celin karaa gudaha qalabka maxaa yeelay, waxay ku dacwaysay. Haddaba haddii xeerka baas oo aan sax ahayn ayaa la galeen 6 jeer isku xigta, ka dibna laftiisa qufulo dukaamada si toos ah iyo ka hortagtaa user ka soo galaan isku day kasta oo cusub code pass.
Waxaad hagaajin kartaa arrintan la isticmaalayo talooyinka soo socda:
Soo Celinta qalabka kaga imaanayo. Si taas loo sameeyo, xirmaan qalabka si computer ka oo uu soo synced. Raac tilmaamaha la siiyey onscreen iyo dhawr daqiiqadood gudahood, qalab u shaqeeyo ganaax.
Xaaladdan oo kale, ay cadeysay in aan faaiido lahayn, ama amar ah in adiga oo aan meeshaba oolin qalabka, ka dibna isku day Mode Recovery ah.
Waxay u badan tahay in mid ka mid ah tallaabooyinka shaqayn doonaa, laakiin haddii aanay, isku day in aad hab DFU. Tani waa version ka sii ballaaran Recovery Mode.
Haddii aanay jirin computer kasta oo aad la, isku day in qaar ka mid ah qalabka kale ee macruufka iyo haddii ay taasi dhacdo in ay iCloud aalad karti aad in uu naafo, markaas fursad u joogo. Isticmaalka Haddaba 'Raadi My iPhone' app waxaa la samayn karaa of si loo helo qalabka si ay u tirtirto dhammaan xogta ku yaal. Si kastaba ha ahaatee, waxaad hubisaa in aad xogta aad xoojiyaa.
Sida habboon, waxaa jira laba hab oo lagu hagaajin feature ammaanka aad iPhone. Xaaladdan oo kale, ma aad synced aad telefoon kula Lugood hor, hanaanka soo kabashada iyo Unlock waa in la yaqaan. Isku day inaad rakibi app Lugood ah haddii aanay idinla joogo. Ka dib markii isku xira iPhone la kombiyuutarka, Lugood si toos ah u bilawday iyo abuuraa raad raac ah oo dhamaan macluumaadka taleefanka. Marka hore, waxaad ka heli kartaa farriimaha sida 'Cancel' ama 'isku day mar kale' muuqday laakiin hoos u qaban batoonka iyo button guriga wada. Haddii logo baaba'aa, ka dibna sii daayo batoonka halka hoos u riixaya badhanka guriga. Waxaa kaliya dhawr daqiiqadood in icon ayaa kuu furmaya oo aad ku xidhan karto qalabka si Lugood ka dib. Farriin ku shuban doonaa wax yar ka kombiyuutarka in ay sheegaan in telefoonka waa in hab-kabashada iyo xiran. Hadda waxaad soo celin karaa qalabka ka gurmad ah.
Haddii ay dhacdo in aad ku xiran qalab aad si Lugood hore, markaas ma jirto wax badan oo dhibaato ah. Connect cable USB xogta la computer iyo iPhone in aan bilowno Lugood. Syncing ilaa macluumaadka dhici doona oo keliya barnaamijyada ka dib markii ay ka badan tahay. Haddaba waxaa gebi ahaanba ku xiran tahay nidaamka version qalliinka in la ordaan oo ay weheliyaan dhawr caddaymaha kale haddii ay jiraan wax kasta oo u baahan galaya code baas ama aan. Haddaba haddii logo Apple u muuqataa, batoonka la sii daayo, halka farta ku hayay hoos ugu button guriga. Haddii aad rabto in la soo celiyo iPhone ay dib u soo goobaha warshad ama dib warbixin gal qalabka loo soo dajiyo, waxaa gebi ahaanba ku xiran tahay doorashada. Si fudud u dooro 'celin ka gurmad' doorasho ayna u oggolaadaan in macluumaadka si aad dib ugu iPhone ku rakiban.
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir A naafada Iphone